सलमानकै कारणले ‘भारत’ छोडेकी हुन् त प्रियंकाले? यस्तो बताइन् कारण – Nepal Journal
सलमानकै कारणले ‘भारत’ छोडेकी हुन् त प्रियंकाले? यस्तो बताइन् कारण
Posted By: Nepal Journal September 13, 2018 | २८ भाद्र २०७५, बिहीबार १७:०४
बिगत लामो समयदेखि बलीउडकी देसी गर्ल प्रियंका चोपडा बलीउडमा मात्र नभई हलीउडमा पनि चर्चा बटुलिरहेकी छिन् । केही दिन पहिले उनी अमेरिकन गायक निक जोनससँगको सम्बन्ध र उनीसँगको इन्गेजमेन्टलाई लिएर चर्चामा थिइन् । उता सलमान खानको फिल्म ‘भारत’ छोडेकाले पनि उनी लामो समयसम्म लाइम लाइटमा रहिन् ।
खासमा ‘भारत’ को सुटिङ हुनुभन्दा केही दिन पहिले मात्र प्रियंकाले फिल्मबाट हात निकालिन् । जसको कारण ब्वाइफ्रेन्ड निक जोनससँगको इन्गेजमेन्ट बताइएको थियो । तर प्रियंकाले सलमानको ‘भारत’ निकका कारणले नभई सलमान स्वयंकै कारणले छोडेको बताइएको छ ।
सलमान खानले केही दिन पहिले ‘भारत’ र प्रियंकालाई लिएर केही बयान दिएका थिए । जसमा उनले भनेका थिए कि, प्रियंकालाई सुरुवातबाट नै थाहा थियो कि, उनी फिल्ममा काम गर्नेछैनन । तर उनले सबैलाई धोकामा राखिन् र अन्तिम समयमा झुठो बहाना बनाएर निस्किइन् । सलमानको उक्त बयानपछि प्रियंकाले पनि यसबारेमा मुख खोलेकी छन् ।
प्रियंकासँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार देसी गर्लले फिल्म ‘भारत’ बाट किनारा केबल विवाह वा कुनै हलीउड प्रोजेक्टका कारणले गरेकी होइनन् । उनले दिशा पटानी र तब्बूका कारणले फिल्म छोडेकी हुन् ।
खासमा जब प्रियंकाले फिल्म साइन गरेकी थिईन्, त्यस समय फिल्ममा उनी एक्ली नायिका थिईन् । तर पछि फिल्ममा दिशा र तब्बूको इन्ट्ी भयो । जसका कारणा प्रियंका चिन्तित भएर फिल्म छोडेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
यसका साथै प्रियंका सलमान खान सुटिङका क्रममा सेटमा ढिला आउने कारणले पनि फिल्ममा काम गर्न नचाहेको बताइएको छ। उनी हलीउड प्रोजेक्टमा समेत व्यस्त रहेकाले सलमानको ढिला सुटिङका जाने बानीलाई लामो समयसम्म झेल्न नसक्ने भएकाले पनि उनले फिल्म छोड्नु नै ठीक सम्झिएर फिल्मबाट हात निकालेको बताइएको छ । एजेन्सी
Be the first to comment on "सलमानकै कारणले ‘भारत’ छोडेकी हुन् त प्रियंकाले? यस्तो बताइन् कारण"